कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अजयले बनाए अस्पताल, संक्रमितको उपचार निशुल्क हुने - SandeshMedia.com
५० लाखको कार चढ्ने ज्ञानेन्द्र शाही फेरि हेलि’कप्टर किन्दै! यस्तो छ उनको आयस्रोत…सेयर गर्नुहो’ला…..
चितवनमा आज फेरी बाघले मान्छे खायो, दया भए मात्र रिप लेखनुहोला !
मुम्बईमा तीनवटा कोभिड केयर सेन्टर बनाउने र त्यहाँ वेडको संख्या पनि थप्दै जाने उनीहरुको योजना छ । उनीहरुले विरामीको उपचारमा लाग्ने सबै खर्च पनि आफै बेहोर्ने घोषणा गरेका छन् । यता अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र उनका पति तथा भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका क्याप्टेश विराट कोहलीले पनि फण्ड स्थापना गरेर कोरोना संक्रमितको उपचारमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
उनीहरुले आफुहरुले २ करोड रुपैया दान दिएका छन् भने ७ करोडको फण्ड निर्माण गर्ने बताएका छन् । त्यो रकम संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन र उपकरणमा खर्च गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत फण्डमा पैसा जम्मा गर्न पनि उनीहरुले सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।
८ असार २०७८, मंगलवार १६:२४
८ असार २०७८, मंगलवार ०७:५०
८ असार २०७८, मंगलवार ०६:४३
८ असार २०७८, मंगलवार १६:१३
८ असार २०७८, मंगलवार ०८:२७